Ikhaya IZITOLO EZIZWELONKE ZOKWENZA IFOOTBALL Abadlali bebhola lebhola lesiNgisi I-Declan Rice Rice Story Story Plus Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba Egcwele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngegama "Declan". Indaba yethu ye-Declan Rice Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokubantwana kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela ukuphila kwakhe kwasekuqaleni, imvelaphi yomndeni, indaba yokuphila ngaphambi kokudumo, ukuphakama ezindabeni ezidumile, ubuhlobo nokuphila komuntu siqu.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi ungumdlali onamandla amakhulu esikhathini esizayo. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abathinta i-Biography ye-Declan Rice okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
I-Declan Rice Izinganekwane Indaba Plus Untold Biography Facts- Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
UDrlan Rice wazalwa ngosuku lwe-14th kaJanuwari 1999 kuyise, uSean Rice nomama uTeresa Rice ELondon, e-United Kingdom. I-Declan Rice ivela kuma-Irish azalwa futhi angalandelwa kubazali bakababa base-Ireland uMargaret noJack abavela eDouglas, isigodi saseCork, e-Ireland. Ngaphansi kwebhola lebhola kanye noyise wakhe othandekayo, uSean Rice.
Siyabonga ngogogo nomkhulu wakhe futhi ngenxa yokuthi unina, Teresa, wayevela eCo Longford e-Ireland, uDclan ukholelwa ukuthi uyisizukulwane sesibili sase-Ireland eBrithani. Ngokufingqa, uDclan njengomuntu u-Ireland kodwa unenhliziyo yaseBrithani.
UDclan Rice wakhulela nomama wakhe, ubaba futhi mhlawumbe akekho umzalwane noma udadewabo e-Kingston phezu kweThames. Njengomfana omncane, kunomqondo wokugcwaliseka owafika lapho kunenkabaza ngezinyawo. Ngempela, zonke izipho ezincane ze-Declan eziceliwe zafika ngendlela yebhola. Ukufana okunjalo kwezemidlalo kamuva kukhokhela izabelo.
I-Declan Rice Izinganekwane Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Uthando lukaDanclan lomdlalo webhola lwambona wathola olunye ulwazi oluthile lokubhalisa kwi-Chelsea Football Academy ngemuva kokuhlolwa okuphumelelayo. Wayengomunye wabafana abambalwa abakhethwe yi-academy ngesikhathi sokuncintisana, ngesikhathi i-Chelsea FC isanda kuguqulwa nguBillionaire Billionaire, I-Roman Abramovich.
Ngalo nyaka i-2006, isisekelo somsebenzi sikaDanclan sabekwa njengomuntu oneminyaka engu-7 ubudala. Kwakuyisikhathi esithakazelisayo somndeni weRis owabona indodana yabo ingena engxenyeni yentsha yeqembu elivele livuselelwe yilo elikhethekile Jose Mourinho.
I-Declan Rice Izinganekwane Indaba Plus Untold Biography Facts- Umgwaqo oDumela
Ukuphila kwe-Chelsea FC academy akulula ngaleso sikhathi. Ngenxa yalokho, kuphela izingane ezinzima kunazo zonke ezisinda esikoleni. Njengabanye abadlali be-academy, ukungavikeleki kwakuyinkinga enkulu kunazo zonke zikaDaulan Rice owabheka ukuthi iqembu lakhe lilingane nabadlali bakhe. Walwa futhi wanqoba amathuba amancane amsiza ukuba athuthuke eminyakeni ephakeme. U-Declan uthuthukile kusukela eminyakeni yobudala kuze kube yilapho efika eqenjini elingenakulibalekayo e-Chelsea ngaphansi kweqembu le-14.
UDaulan Rice ubephakathi kwezinye izingane ezimbalwa ezazibona zihlukumezeka endaweni engaphansi kwe-Chelsea FC ngesikhathi esingaphansi kweminyaka eyi-14. Ngokudabukisayo, u-Declan ompofu akakwazanga ukubhekana nokucindezeleka futhi lokhu kwaletha umphumela omkhulu. Ukhululwe yi-Chelsea academy eyambona njengemali edingekayo.
Ngalo nyaka, i-2014 kwakungu-Declan Rice owabhekene nokucindezeleka njengomuntu othanda inkanyezi yebhola. Ngaphandle kokungabaza, noma yimuphi umfana webhola ophethe abahlala esikoleni bayokwazi kahle ubuhlungu obukhulu obungokomzwelo nemiphumela engozini yengqondo engabangela. UNabil Fekir nazo zabhekana nesimo esifanayo.
Naphezu kokukhishwa kwe-academy yase-Chelsea, izinqumo zize zihlale ziyi-watchwords. Ngalowo nyaka 2014, Declan wabizwa yi-Academy yaseWest Ham United ngezinyathelo. Ngaphakathi I-West Ham, i-Declan itholwe induduzo kude neqiniso lakhe elikhathazayo.
I-Declan Rice Izinganekwane Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphakama Ekudumeni
Ukuphila okungcono endleleni eya ePro:
Ngo-16 Disemba 2015, kungakapheli unyaka ngemuva kokujoyina u-Wes Ham osemusha, uRissi wasayina isivumelwano sakhe sokuqala neqembu futhi waqala ukufaka iqembu leqembu le-U23. Lesi yisikhathi lapho eqala ukufeza izimpumelelo. Owokuqala weza ngomhla ka-10th kaNovemba 2017 ngenkathi uRis won i-PL2 isidlali senyanga ka-Okthoba, i-2017.
Ngomhla ka-Mashi 2018, iRisiti yahlonishwa nomdlali we-U19 wonyaka. Le feat yamenza ithikithi leqembu eliphakeme.
Ukuqala kukaDanclan kwabaHammer bamtholile indoda yomklomelo womdlalo. Ngokusho kwebhola;"Kwakungumzuzu oqhosha kakhulu kimi nomndeni wami. Uthando olukhulu kubaba wami owafika konke ukuphuma ukuze abukele, akuthande. "
Ngo-Ephreli 2018, u-Declan Rice wabizwa ngokuthi ungumgijimi we-2017-18 Hammer of the Year award. UMarko Arnautović. Naphezu kokulahlekelwa yilapho, iRandi yagcina enye umklomelo wezintambo ezincane zonyaka ngonyaka wesibili ogijima.
"Ngibuyele emuva ngemuva kokukhishwa yi-Chelsea ku-14 eminyakeni emihlanu kamuva ngidlala iWest Ham ku-Premier League," kusho uR Rice owadedelwa ngu-Chelsea ngesikhathi eneminyaka engu-14.
LeSonto kwakuyizinsuku eziyinkimbinkimbi kanti enye eyenza umndeni wakwaReclan Rice uziqhenye ngokuzifeza kwakhe. Ilayisi yasebenzisa leli thuba ukuze liqinisekise iBellani ukuthi lihle kangakanani. Wenze isitatimende eqenjini futhi wayejabule kakhulu ngokusebenza kwakhe.
Ngo-23 December 2018, iRis yenza ukubukeka kwe-50th kuWest Ham. Waba umdlali wokuqala ukwenza kanjalo ngenkathi esemncane esebetha UMichael Carrick's irekhodi. Ngemuva kokubona isithakazelo esivela kuMan City, iWest Ham yanquma ukumnikeza inkontileka entsha kuze kufike i-2024 ngenketho yonyaka owengeziwe. Leyo mzuzu echazayo ithathwe kuvidiyo ngezansi;
I-Declan Rice Izinganekwane Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Ubudlelwano
I-Declan Ilayisi yilabo abathola uthando phakathi neminyaka yakhe esemusha. Wanquma ukuba nobuhlobo nomunye umuntu osemusha, okwenza kube ngumphakathi ngisho nakwezokuxhumana.
Ngokungafani nabaningi bebhola lezinyawo, ukwenza ubuhlobo bomphakathi akuwona umqondo omuhle njengoba ucabangela ukuthi ukuhlolwa okunjalo komphakathi kungathinta imisebenzi yabo encane. Kodwa-ke, akuyona into kaD declan Rice owazi kakade isitokisi sakhe. Ngaphambi kwenkanyezi yebhola, kukhona iqoqo elihle egameni likaLauren Fryer oneminyaka efanayo nesoka lakhe.
Ilayisi uhlobo lomthandi ongakwazi ukucula izingoma zokuthanda intombazane yakhe, ukubhala izinkondlo, izithombe zepende, futhi okubaluleke kakhulu, ukudala amavidiyo omculo othandwayo ngezithombe zakhe zothando no-Lauren Fryer. Ngezansi enye yamavidiyo anjalo.
I-Declan Rice Izinganekwane Indaba Plus Untold Biography Facts- Indlela yokuphila
Ngaphambi kwe-28th kaDisemba, i-2018, i-Declan yathola i-peanut ye-£ 3,000-ngesonto nje. Njengesikhathi sokubhala, uthola i-£ 30,000-ngesonto elichaza ngokoqobo ukuguquka kokuphila.
I-Declan Rice Izinganekwane Indaba Plus Untold Biography Facts- Amaqiniso angaziwa
UDeclan ngesikhathi ejoyina i-West Ham academy, uDclan waba umxhwele no-Pablo Zabaleta owadlala eMan City ngaleso sikhathi.
Ekhuluma ngokubonga kwakhe kwe-Argentina, wake wathi ...; "Ngangingumfana kaPablo ku-2014. Kusuka ku-Fan, ngaba ngumlingani naye
I-Declan Rice Izinganekwane Indaba Plus Untold Biography Facts- Ukuphila Personal
Ukukwazi impilo kaDavlan Rice kuzokusiza ukuba uthole isithombe esiphelele kuye.
I-Declan ngumuntu onesimo sangaphakathi sokuzimela esiye samenza ukuba athuthuke kakhulu kokubili empilweni yakhe. Ukukhululwa yi-academy yaseBelcome FC yakhiwe ku-Declan ukuthi isimo sengqondo esinzima nesiyalo esichaza isitayela sakhe samanje sokudlala.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda iDanlan Rice Childhood Indaba yethu kanye ne-Untold Biography Facts. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
Les Roberts NgoJanuwari 12, 2019 E-6: 22 pm
Declan, sihalalisela ngokufaka umgomo wakho wokuqala namuhla. Umgomo wokuqhaqhazela, nomsebenzi omuhle kakhulu kumakhadi.
(Sicela udlalele i-England). lol.
Ngaphandle kwalokho, ngilahlekile ukuxhumana nobaba wakho eminyakeni embalwa eyedlule, futhi ngingathanda ukumbamba naye, indoda enhle kunazo zonke engake ngahlangana nayo empilweni yami.
Uma ungamtshela ukuthi le plumber kusukela ezinsukwini ze-phps ithumela okungcono kakhulu, ngizobonga kuze kube phakade.
Akuyona into eyenziwe ngamapulangwe, ngiyayithanda i-westham, ngibe ngumdlali we-qpr wokuphila uLol, kuphela ukuhleka.
Ukuhlonipha, uLes Roberts.
UWilliam Vaughan NgoMashi 29, 2019 Ku-12: 13 am
Ubaba kaDellan, u-Sean, angase akhumbule ukudlala eqenjini lethu lesikole lapho eseyi-11?
Siwine 'indebe' edlala emhlabathini waseBurton Road endala ka-Kingstonian.